“Waxaanu Dhalinyaradda ku baraarujinay In wax la siistaa Jirin Qaranimadda Somaliland” | Somaliland.Org
“Waxaanu Dhalinyaradda ku baraarujinay In wax la siistaa Jirin Qaranimadda Somaliland”
December 7, 2012	Hargeysa (Somaliland.Org)-Guddoomiyaha ururka XAQSOOR Xasan Ciise Jaamac, ayaa sheegay inay dhalinyaradda taageereyaasha ururkiisa uu ku booriyay ahmiyadda nabad-gelyaddu u leedahay qaranimadda.
“Dhalinyaradda waxaanu ugu khudbadaynay Istaadiyamka Hargeysa, waxaanuna doonaynaa in nabada Somaliland oo qolyahayaga Xaqsoor aanu naf iyo maalba u hurnay, waxaanu doonaynaa in aan lanaga carsha-casrhayn, maadaama oo ururkani taariikh baal-dahab ah ku leeyahay dalka,”ayuu yidhin Xasan Ciise oo maanta u waramayay laanta afsoomaaliga ee BBC-da.
“Waxaanu dhalinyaradda ku baraarujinay inaan wax la siistaa jirin qaranimada Somaliland, xoriyadiisa iyo nabadgalyadiisa. Dadka Mudaharaadayaa waxay u badan yihiin taageerayaasha Xaqsoor waana Caddaan.”
Guddoomiyaha XAQSOOR oo ka hadlayay asbaabaha mudaharaadkani ka dhashay, waxa uu yidhi “Doorashadii baa gobolo dhan la yidhi doorashada ka qayb-gali maysaan oo la duudsiyey xuquuqdoodii dastuuriga ahayd, intii dhexena waa la boobay oo Koombuutaradii ayaa laga waayay oo markii dambe la galiyey cod intii hore ka yar.”
Previous PostXukuumadda Somaliland oo ka hadashay Shaqaaqo dhimasho iyo dhaamac keentay oo ka dhacday HargeysaNext PostBaaqa Nabadeed ee Xildhibaan Dogox u Jeediyay Taageereyaashiisa	Blog